Akwụkwọ ikike Cannabis Kentucky - wii wii ọgwụ na Kentucky
Akwụkwọ ikikere Cannabis Kentucky
Mmebe Iwu Ahụike Kentucky
nka iwere ikike
Akwụkwọ ikikere Cannabis Kentucky enwere ike ịbịa maka 2020! Maka oge mbụ - Kentucky mere ntuli aka wee gafee Mmepụta Ahụike Ahụike Cannabis! Iwu Kateucky Ahụike Kentucky nwere ike gbanwee n'oge na-adịghị anya n'ihi na ndị omebe iwu steeti ya mere ntuli aka 65-30 iji nye ndị nke Kentucky ọgwụ ike. Ọ ga - abụ iwu ma mee ka ndị ọrịa nweta ọgwụ cannabis iwu kwadoro yana maka ndị ọzọ izere njide ndị na - enweghị isi nke ọha mmadụ na - egbochi iwu.
Mụọ maka ụdị akwụkwọ ikike wii wii na-abịa ọgwụ ike dị na Kentucky site na HB 136 N'okpuru ebe a!
Onweghi ihe doro anya ma, mana ụlọ Kentucky masịrị akwụkwọ iwu ịjuụ wii wii - nke gbanwere aha ya ịbụ canis na ihe ndị ọzọ. Iwu Iwu Ahụike Ahụike Kentucky na-agbagharị, nke pụtara na Kentucky nwere ike sonyere na nkwado iwu cannabis n'oge na-adịghị anya maka ndị ọrịa ya! N'oge na-adịghị anya, enwere ike ị nweta ya Akwụkwọ ikike iji rụọ ọrụ azụmahịa cannabis nke gị na Kentucky.
Kpọọ maka akwụkwọ Ikikere Ahụike Kentucky Medical Cannabis
Na-achọ Kentucky Ozi Dispensary - Pịa Ebe a.
Kentucky HB 136:Mepụta dị iche iche Iwu Osisi Cannabis Kentucky tkọwaa okwu; ịhapụ ịnapụ wii wii usoro iwu ihe omume dị na iwu Kentucky n'ụzọ megidere; chọrọ ngalaba maka mmanya na-egbu egbu na nchịkwa Cannabis iji mejuputa ma dozie usoro wii wii na Kentucky; iji guzobe ngalaba nke ọgwụ ị Mariụ mmanya n'ime Ngalaba Mmanya Na-a Canụ Ihe Ọ andụ Canụ Ọgwụ; iji gosipụta mgbochi n'ihe mgbochi nke ọgwụ wii wii site na iji mee ka ndị ọrịa ruo eru, na-eleta ndị ọrịa, na ndị edoro ya elekọta; iji guzobe ụfọdụ ihe nchedo maka ndị na - akụ ya; iji guzosie ihe nchebe maka ndị na - eme ya; iji nye m maka ikike nke ndị na-eme ihe site na bọọdụ ikikere steeti iji nye asambodo e dere ede maka ị mariụ wii wii; iji gosipụta nchedo ọkachamara maka ọka iwu; machibidoro inwe ma ọ bụ ị mariụ ọgwụ wii wii na bọs ụlọ akwụkwọ, na ngalaba ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ praịmarị ọ bụla, ụlọ akwụkwọ ndozi, Kentucky Medical Cannabis Legalization, ihe ọ bụla nke gọọmentị etiti, ma ọ bụ mgbe ị na-anya ụgbọ ala; machibido ị smokingụ wii wii ọgwụ; ịhapụ onye were ya n'ọrụ ka ọ machibido ịnwe ọgwụ na ị ofụ marijuana ọgwụ.
Iwu Ahụike Ahụike Kentucky
Iwu ọgwụ wii wii ọhụrụ Kentucky ga-achọ ka ngalaba ahụ mejuputa ma rụọ mmemme kaadị njirimara;
iji gosipụta akara maka kaadị njirimara; iji gosi ụgwọ kaadị njirimara; iji cho ka ngalaba a rụọ ọrụ nnata nke nnata ikike nnabata;
iji guzosie ihe eji achọ ihe maka kaadị njirimara;
iji guzobe mgbe ngalaba ahụ nwere ike ịgọnahụ ngwa maka kaadị njirimara; igosipụta ụfọdụ ọrụ maka ndị na --adị ihe iji gosi mgbe enwere ike ịkagbu kaadị ndekọ njirimara;
iji gosipụta ikikere azụmaahịa azụmahịa dị iche iche;
iji guzosie ike ị nweta ikike azụmaahịa azụmaahịa; ịchọrọ ka etinye ụfọdụ ozi na ngwa maka ikike azụmahịa cannabis;
igosipụta mgbe ngalaba ahụ ga-agọnarị akwụkwọ maka ikike azụmaahịa cannabis Iwu Kentucky Medical Cannabis;
machibidoro onye na-eme ọrụ ka ọ ghara ịbụ onye isi na ngalaba ma ọ bụ onye isi na azụmaahịa azụmahịa. machibidoro nnabata ndi mmadu nke azumahia cannabis; na
iguzobe iwu maka ire ahia nke obodo.
EBIGBO EGO: Etu ị ga-esi mepee akwụkwọ Cannabis
Chọrọ Imepe Azụmaahịa Cannabis
Kentucky yiri ka ọ ga-emebi ọgwụ Marijuana
Iwu Ahụike Ahụike Kentucky - Izu gara aga, otu Kọmịshị steeti Kentucky steeti buliri ụgwọ iji meju marijuana ọgwụ n'ụzọ iwu, ụgwọ ahụ, HB 136, nwere nkwado dị ukwuu na steeti ahụ, ma nwee ezigbo ohere ịghọ iwu. Recentlylọ omeiwu a gafere na nso nso a na Kọmitii standslọ 116 peeji nke,. N'ụzọ dị ịtụnanya, nke a dị mkpụmkpụ karịa Iwu Iwu Cannabis Illinois na Iwu Iwu, nke batara na peeji 600.
HB 136 mepụtara usoro ikikere maka “Azụmahịa afọ” ndị mebere ụlọ ọrụ, na-ejigide usoro dị ugbu a nke na-ezo aka na "cannabis" kama "wii wii." Billgwọ ahụ na-ahapụ ọtụtụ nkọwa nke ikikere na usoro nchịkwa nchịkwa ọdịnihu, ikekwe yiri ka ọ dị peeji 200 nke iwu "ihe mberede" maka ikikere cannabis na Illinois.
Lickpụrụ ikikere zuru oke na -emepụta ikikere azụmaahịa cannabis ise n'okpuru Iwu Iwu Ahụike Ọhụrụ nke Kentucky, nke dị n'okpuru ụgwọ na chọrọ dị iche iche. N'okpuru, anyị na-achọpụta ụfọdụ usoro akara dị elu maka ikikere azụmaahịa cannabis dị iche iche.
Thegwọ ahụ kọwara “onye ọrụ ubi” dị ka ndị a:
“Onye nrụpụta” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isi a nke na-akọ ihe, na-ewe ihe ubi, ma nyefee ihe ọkụkụ nye ihe ọkụkụ, onye na-ahụ maka ihe, onye na-emepụta ihe, ma ọ bụ ihe nchekwa nchekwa;
Ndị ọrụ ịkụ ọrụ amachaghị akụrụngwa akụrụngwa. Nkebi nke 21 na-amachi ihe omume ha dịka:
Inweta, inweta, ịkọ ihe, ịkọ ihe, ịkọ ihe, idozi ihe, ma ọ bụ ịkwakọba mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi, ma ọ bụ ihe ọkụkụ akụrụngwa;
Inye, mbugharị, nyefee, nyefee ma ọ bụ ree akụrụngwa osisi ma ọ bụ ihe ndị metụtara ya na azụmaahịa ndị ọzọ nwere ikikere na steeti a; ma obu
Igha mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụ osisi gaa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ikike ịzụlite ahịhịa na steeti a ma ọ bụ ikike ikike ọ bụla.
Ndị na-akụ ọrụ bụ naanị ụlọ ọrụ ikikere nke nwere “tiers” dị iche iche, nke na-emetụta ọnụ ahịa ikike. Nke a dị ka akwụkwọ ikike ndị ọzọ na cannabis na steeti ndị ọzọ iwu kwadoro. Onwere ndi Tier I, Tier II, Tier II, na ndi Tier IV, dabere n ’ebe ndi oru ugbo ha di:
Erzọ ọkụkụ Tier m - 2,500 square ụkwụ ma ọ bụ karịa pere mpe;
Erkwụ - 10,000 square ụkwụ ma ọ bụ obere;
Tier III- 25,000 square ụkwụ ma ọ bụ obere;
Tier IV- 50,000 square ụkwụ ma ọ bụ obere.
Steeti aghaghi ikwenye opekempe Ikike onye ọrụ ubi n’ime otu afọ ka ụgwọ ọrụ ahụ gachara.
N'ikpeazụ, ndị ọrụ ubi (yana ndị na - emepụta ihe na ndị na - eme ihe ngosi) nọ n'okpuru iwu oké njọ ụtụ isi. Nkebi nke 33 na-atụ ụtụ isi maka 12% na oke nnata nke onye ọrụ ubi.
KENTUCKY CANNABIS AKW DISKWỌ AKA
Thegwọ ahụ na-akọwapụta “ngalaba” dị ka ndị a:
“Nkwụghachi ụgwọ” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isiakwụkwọ a nke na-enweta, nwee, na-ebugharị, na-ebugharị, na-ebugharị, na-ere, na-enye ma ọ bụ na-enye ọgwụ mkpụrụ osisi iri na isii nke ndị nwere kaadị;
Ibe akwụkwọ ikike iji kesaa akwụkwọ nri bụ ntakịrị karịa karịa inye ikikere maka ndị ọrụ ugbo. Thegwọ ahụ chọrọ n'ezie ka ndị nkesa ọgwụ na ndị ahịa ọgwụ jikọta ya. Nkebi nke 22 na-enye:
A ga-eme ka ndị na-ahụ maka ọgwụ ga- ehibe ma dozie nkwekọrịta 10 dị ka akọwara na Nkebi nke 10 nke Iwu a, yana onye na-ahụ maka ọgwụ na-akwadosi 11 nke Kentucky Board of Pharmacy nyefere itinye aka na nkwekọrịta 12 na ngalaba nkesa
Steeti aghaghi ikwenye opekempe Akwụkwọ ikike ikikere izizi n'ime otu afọ nke ụgwọ ahụ amalitela ịdị. Billgwọ ahụ chọkwara ka ọ dịkarịa ala, otu ngalaba ka akwadoro maka “mpaghara mmepe” nke ebidobere. N'ụzọ bụ isi, ha ga-ekesasị ebe niile iji kpuchie steeti.
Ọ dabara nke ọma, ndị na - ebuputa ego anaghị anọ n’okpuru ụtụ isi buru ibu nke ndị ọrụ ubi, ndị na-eme ihe ngosi, na ndị na-emepụta ihe.
KENTUCKY CANNABIS PROCESSOR LICENSE
Billgwọ ahụ kọwara “onye nhazi” dịka ndị a:
“Ihe njikwa” pụtara ihe enyere ikike n’okpuru isiakwụkwọ a nke na-enweta ihe ọkụkụ n’aka ihe ọkụkụ iji kwadebe, dozie ya, chịkọta ya, jikọta ya, ma ọ bụ mezigharịa ihe ọkụkụ akụrụngwa, yana ngwugwu nwere ngwaahịa ma ọ bụ nke sitere na akụrụngwa akụrụngwa. maka ire nye ikike nwere ikike.
A na - ahapụ ndị na - eme nhazi ihe ụfọdụ edepụtara na Nkebi 23:
(a) Inweta ma ọ bụ ịzụta akụrụngwa akụrụngwa nke sitere n'aka onye na-akụ ihe, ma ọ bụ onye na-emepụta ihe na steeti a;
(b) Inweta, nhazi, ịkwadebe, imepụta, njikwa, ngwakọta, ịkwadebe, ma ọ bụ ịkwakọkwa ọgwụ ọgwụ;
(c) Transfer nyefe, mbufe, bute ma ọ bụ ree ọgwụ ọgwụ na ihe ndị ọzọ metụtara ya na azụmaahịa ndị ọzọ a na-enweta na steeti a; ma obu
(d) Igha mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụ osisi na ụlọ ọrụ ndị yiri ya nwere ikike ịzụlite ahịhịa na steeti a ma ọ bụ ikike ikike ọ bụla.
Billgwọ ahụ chọrọ ka ndị opekata mpe ise (5) nweta ikikere n'ime otu afọ agafe. Ndị na-eme iwu na-edo onwe ha n'okpuru otu ụdị ụgwọ nnata 12% dị ka ndị ọrụ ubi.
KENTUCKY CANNABIS MAKA AKWCKWỌ AKCKỌ
Billgwọ ahụ mepụtara ikike maka “ndị na-emepụta”, nke bụ ndị bụ ndị ọrụ ubi na ndị nhazi. Kpọtụrụ, akọwara ha na Nkebi 1 dịka:
“Onye na-emeputa ihe” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isi a nke enyere ikike ka ọ rụọ ọrụ 17 ma na-arụkwa ọrụ ndị enyere ikike nke onye ọrụ ubi na onye nrụpụta 18.
N'okpuru Nkebi nke 24, a na-ahapụ ndị na-emepụta ihe, ka ha:
(a) Inweta, inweta, ịkọ ihe, ịkọ ihe, ịkọ ihe, idozi ihe, ma ọ bụ ịkwakọba mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi, ma ọ bụ ihe ọkụkụ akụrụngwa;
(b) Inyefe, mbugharị, nyefee, ma ọ bụ ire ihe ọkụkụ, ngwaahịa cannabis ọgwụ, ma ọ bụ nnweta metụtara ya na azụmaahịa ndị ọzọ nwere ikikere a na steeti a;
(c) Igha mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụ osisi na ụlọ ndị yiri ya nwere ikike ịzụlite ahịhịa na steeti a ma ọ bụ ikike ikike ndị ọzọ;
(d) Inweta ma ọ bụ ịzụta ahịhịa akụrụngwa n'aka onye ọrụ ugbo na steeti a; ma obu
(e) Inweta, nhazi, ịkwadebe, nrụpụta, njikwa, ngwakọta, ịkwadebe, ma ọ bụ ịkwakọkwa ọgwụ ọgwụ;
N'ime otu afọ nke ụgwọ ahụ ga-amalite, steeti aghaghi iwepụta opekata mpe akwụkwọ ikike atọ (3). Ndị na-emepụta ihe na-edo onwe ha n'okpuru ụtụisi excise.
KENTUCKY CANNABIS AKW COMKWỌ MAKA FM FAKA MAKA ACMACAKA
Ngalaba Na-ahụ Maka Nchedo Ahụike nke ikikere dị n'okpuru iwu na-arụ otu ọrụ abụọ:
(a) Nnwale cannabis ọgwụ nke azụmahịa azụmaahịa enyere ikike n'okpuru isi a; ma obu
(b) Ndi nwere ndi n’ezi akwukwo na ndi ahia cannabis;
A na-anabata ọrụ ndị a n'okpuru Nkebi 25:
(1) Inweta ma ọ bụ inweta ahịhịa ọgwụ a na-enweta n’aka ndị nwere kaadị ma ọ bụ azụmaahịa 26 nke steeti a;
(2) Iweghachi cannabis ọgwụ ọgwụ ka ndị nwere kaadị ma ọ bụ azụmaahịa cannabis na steeti a;
(3) Ibufe ahihia ogwu nke ndi ulo oru cannabis meputara na steeti a;
(4) Mmepụta ma ọ bụ ọre nke ihe agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ enyerela maka iji cannabis ọgwụ;
(5) Mmepụta, ire, ma ọ bụ njem nke akụrụngwa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-abụghị ọgwụ ọgwụ, gụnyere ma ejedebeghị na ngwa ụlọ nyocha yana ihe nkwakọ ngwaahịa nke ndị azụmaahịa na ndị na-eji kaadị cannabis na-eji, ndị nwere kaadị ma ọ bụ azụmaahịa ikike n'okpuru isiokwu a;
(6) Nnwale nke ọgwụ cannabis mepụtara na steeti a, gụnyere nnwale maka ọdịnaya cannabinoid, ọgwụ na-egbu egbu, ahịhịa, nsị, vitamin E acetate, na ihe mgbakwunye ndị ọzọ amachiri;
(7) Ndị na-azụ kaadị na ndị azụmaahịa azụmaahịa. Ọzụzụ nwere ike ịgụnye mana ọnweghị oke na:
(a) tivationzọ ọkụkọ dị mma, iwe ihe ubi, nkwakọ ngwaahịa, labeelu, na nkesa ọgwụ ọgwụ;
(b) Nchebe na usoro ndekọ ego; na
(c) Nchoputa ihe omimi sayensi na ogwu banyere ihe omuma a nke riri oke ogwu nke ogwu;
(8) compensationnata ụgwọ maka omume kwere n'okpuru ngalaba a; na
(9) Itinye aka na azụmaahịa ọ bụla na-abụghị cannabis nke iwu obodo machibidoro ma ọ bụ machibido ya iwu.
N’adịghị ka ikikere ndị ọzọ, steeti achoghi iwepụta opekempe nke ikikere nnabata nchekwa afọ.
Enwere isi ihe ole na ole ọzọ na ụgwọ ahụ nke ga-emetụta ahịa cannabis ọgwụ na Kentucky n'ụzọ dị ukwuu:
Onye na-emepụta akwụkwọ ikike nwere ike rụọ ọrụ otu (1) ịkọ ahịhịa na otu (1) ebe nhazi, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị iche iche;
Renegwọ mmeghari ikike ikike sitere na pasent nke nnata ego:
Ọ bụrụ na nnata ego erughị $ 2,000,000, ụgwọ ya bụ 1% nke nnata ego + $ 500;
Ọ bụrụ na nnata ego dị n'etiti $ 2,000,000 na $ 8,000,000, ụgwọ ahụ bụ 1.5% nke nnata ego + $ 2,000;
Ọ bụrụ na nnata ego karịrị $ 8,000,000, ego a na-akwụ bụ 2% nke nnata ego zuru oke + $ 4,000.
Ọ bụrụ na erughi erughi $ 2,000,000 nke nnabata nde afọ gara aga, ego ahụ bụ $ 500 gbakwunyere 1% nke nnata ego;
Ngalaba nwere ike gọnarị akwụkwọ ikike maka ihe obula “N'iji ezi uche dị”, gụnyere:
A mara onye isi na-ekpe ikpe maka ụfọdụ mmejọ mmejọ;
Ihe owuwu a anaghi emegide iwu obodo;
Ihe owuwu ahụ anaghị emeju nchekwa, nlekọta, ma ọ bụ iwu ndekọ.
AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ AH KMUT KENTUCKY CANNABIS
Billgwọ ahụ ga-agbanwe ka ọ na-arụ ọrụ ya site na usoro mmebe iwu na Frankfort. Agbanyeghị, dị ka ọ na-eguzo ugbu a, HB 136 na-adị ka ọ dị ka usoro nlekọta ahụike na steeti ndị ọzọ. Igwe ahụ ga-akụ n'okporo ụzọ ozugbo steeti nyere iwu maka usoro ngwa zuru ezu. Kentucky dị mma nke ọma isonye n'ọtụtụ steeti ndị ọzọ mechara nweta uru ahụike cannabis.
Maka ebumnuche nke Nkebi nke 1 ruo nke 30 nke Iwu a, ọ gwụla ma isi okwu a chọrọ:
6 (1) “Bona fide practitioner-haƙuri mmekọrịta” pụtara ịgwọ ma ọ bụ nyocha
7 mmekọrịta, n'oge onye na - eme ya:
8 (a) Emechawo nyocha na nyocha nke mmadụ n’ime onye
Akụkọ banyere ahụike nke onye ọrịa na ọnọdụ ahụike ugbu a;
10 (b) Soro onye ọrịa mee nyocha gbasara ọgwụgwọ nwere ike ịdị
Ngwurugwu 11 palliative nke ogwu ogwu;
12 (c) agwawo onye ọrịa ahụ ka ọghọm ya na nsogbu ọ bụla ọ na-ebute
13 iji ọgwụ ọgwụ ọgwụ gụnyere gụnyere mmekọrịta dị n'etiti Mmebe Iwu Ahụike Kentucky
Cannabis ọgwụ na ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ ọ bụla onye ọrịa ahụ nwere
15 na-ewere n’oge ahụ; na
16 (d) Egosipụtala ihe ndị mmadụ tụrụ anya na ọ ga-eme ka ha lekọta ya
17 ọgwụgwọ nye onye ọrịa;
18 (2) “Azụ ahịa Cannabis” pụtara onye ọrụ ubi, ihe nkesa, onye na-emepụta ihe, ma ọ bụ
19 nchekwa nnabata nchekwa nyere ikike n'okpuru isi nke a;
20 (3) “Onye na-ahụ maka azụmahịa Cannabis” pụtara onye isi, onye isi ngalaba, onye ọrụ,
21 ndị ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ onye nnọchite nke azụmaahịa;
22 (4) “Kaadi” putara:
23 (a) Onye ọrịa tozuru oke, onye nlekọta ahọpụtara, ma ọ bụ leta onye ruru eru
24 onye ọrịa tinyere akwụkwọ maka, nwetara ma nwee ndekọ aha bara uru
Kaadị njirimara 25 nke ngalaba ahụ nyere dị ka isiakwụkwọ a chọrọ; ma obu
26 (b) Onye ọrịa tozuru etozu nke mechara nwee ma nwee ndekọ dị mma
Kaadị amata 27, ma ọ bụ ihe dakọtara ya, nke enyere na iwu nke
UNOFFICIAL COPY 20 RS HB 136 / GA Peeji nke 2 nke 118 HB013610.100 - 366 - Legitik Ahụike Ahụike Kentucky
1 steeti ọzọ, ógbè, ókèala, ala na ụma, nwekwaa ikike nke
2 United States, ma ọ bụ obodo Amerịka ghọtara nke ahụ
Mmadụ atọ ga-eji afọ nwere ike ị nweta ọgwụ ọria
5 (5) “Onye rụpụtara ọrụ” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isi nke a na-akọ, ihe ubi,
6 ma nyefe onye ọzọ ihe ubi, ihe omume, ngwa ọrụ
7 onye na-emepụta ihe, ma ọ bụ ebe nchekwa na-enye nchekwa;
8 (6) “Onye na-ahụ maka ọrụ” pụtara onye isi, onye isi ọrụ, onye ọrụ,
9 onye ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ onye nnọchite nke onye ọrụ ubi;
10 (7) “Ngalaba” pụtara Ngalaba Ahụike Ọha dịka esi guzobere na KRS
12 (8) “Onye edobere onye nlekọta” pụtara onye debara aha ya n'akwụkwọ dị ka nke a
Ngalaba 13 dịka isiakwụkwọ a chọrọ;
14 (9) “Nzipu aha” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isi nke a,
15 nwere ọgwụ, nyefee, nyefee, mbufe ụgbọ mmiri, ree, nyefee ma ọ bụ ọgwụ ọgwụ
Cannabis nye ndị nwere kaadị;
17 (10) “Onye nnọchite anya onye nnọchianya” pụtara onye isi na ndị isi, onye ọrụ, onye ọrụ
18 ndị ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ onye nnọchi anya nke nnyefe ihe;
19 (11) "qupụpụ mmebi iwu jọgburu onwe ya" pụtara:
20 (a) Nmehie iwu nke ga - ewere mmadụ ahụ dịka onye omekome ihe ike n'okpuru
21 KRS 439.3401; ma obu
22 (b) Imebi iwu steeti ma ọ bụ nke gọọmentị na-achịkwa nkewapụtara
23 dị ka ikpe na ikike ebe enyere onye ahụ ikpe, belụsọ:
24 1. Mmehie nke a ga - eji mara ikpe ahụ, gụnyere oge ọ bụla,
Arlọ mkpọrọ, ma ọ bụ onye ana-eleba anya, ka emechara ise (25) ma ọ bụ karịa
Afọ 26 tupu mgbe ahụ; ma ọ bụ 27 2. Mmejọ nke gụnyere omume nke Ngalaba 1 ruo 30 nke a
Iwu Ahụ ike nke Kentucky - na ibe na-esote
O nwere ike ịbụ na ihe a mere nwere ike ime ka a maa mmadụ ikpe, ma, ọ chọghị
2 mere tupu ebido Usoro nke 1 ruo 30 nke Iwu a ma ọ bụ
Ndị ikike na-abụghị gọọmenti etiti gbara akwụkwọ
5 (12) “Ihe mkpuchi, mkpọchi mkpọchi” pụtara oghere na-eto n'ime ụlọ dịka ụlọ,
6 griin haus, ụlọ, ma ọ bụ mpaghara ime ụlọ ọzọ nke edochiri anya
7 onye ọrụ ubi ma ọ bụ onye na-emepụta ihe na-arụ ọrụ, ejikwa mkpọchi na nchekwa ndị ọzọ arụ ọrụ
Ngwaọrụ 8 na-enye ohere ịnweta naanị site n'aka ndị ọrụ nke onye ọrụ ubi ma ọ bụ onye nrụpụta, dị ka
9 ngalaba choro;
10 (13) “Nnata nnata ego” pụtara ego niile enyerela ego, otuto, ala, ma ọ bụ ndị ọzọ
Ego 11 bara ezigbo uru n’ụdị ọ bụla, site na azụmahịa cannabis;
12 (14) “Mpaghara mmepe” pụtara otu ihe akpọchiri akpọchi, akpọchiri akpọchi;
13 (15) “Marijuana” pụtara otu ihe ahụ akọwapụtara na KRS 218A.010;
14 (16) “Ọgwụ ọgwụ” pụtara wii wii ka akọwapụtara na KRS 218A.010
15 na-akọ ihe, na-ewe ihe ubi, na-edozi ya, na-emepụta, na-ebugharị, na-ekesa, kesaa,
Rere ma ọ bụ ejiri ma ọ bụ jiri ya na Ngalaba 16 ruo 1 nke Iwu a. Usoro ahụ
17 “ọgwụ ọgwụ” na-agụnye ngwaahịa cannabis ọgwụ na ahịhịa ahịhịa 18;
19 (17) “Ngwa ọgwụ ọgwụ” pụtara ngwa, ngwaahịa, ma ọ bụ ihe ọ bụla
20 ụdị ọ bụla eji, eme atụmatụ maka, ma ọ bụ nke e mere maka ijikere,
21 ịchekwa, iji, ma ọ bụ rie nri ọgwụ dị na Ngalaba 1
22 ka 30 nke Iwu a;
23 (18) _ ”Ngwa ahịa ọgwụ” pụtara ogige, mmepụta, nnu,
24, ngwakọta, ma ọ bụ nkwadebe nke akụkụ ọ bụla nke osisi Cannabis sp., Mkpụrụ ya
25 ma ọ bụ resin ya; ma ọ bụ onyinye, ngwakọta, ma ọ bụ nkwadebe ọ bụla nwere ya
26 n’ime ọtụtụ ihe ndị a mgbe akọlitere, ma ihe, ma hazie, mepụta
27 ebugharị, nyefe, kesaa, ree, nwe ma ọ bụ jiri ya dabere
AKWFKWỌ UNWUFICIAL 20 RS HB 136 / GA Peeji nke 4 nke 118 HB013610.100 - Legọsụ Ahụike Ahụike Kentucky
1 Nkebi 1 ruo 30 nke Iwu a;
2 (19) “Nta” pụtara onye na-erughị afọ iri na asatọ (18);
3 (20) “Pharmacist” pụtara otu ihe ahụ na KRS 315.010;
4 (21) “Onye na-eme ihe” pụtara dibia nke enyere ikike ka ọ debe nchịkwa
Bekee 5 dị n'okpuru KRS 320.240, ma ọ bụ nọọsụ aha dị elu edere aha ya bụ onye
Nyere ikike idebata ihe ndị achịkwa n'okpuru KRS 6, onye bụ
7 Ndị ikike steeti nyere ikike iji nye asambodo e dere ede na-aga n'ihu
8 Nkebi 5 nke Iwu a; 9 (22) “Nhazi” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru amaokwu a nke nwetara ahịhịa
10 ihe sitere na onye na-akụ ihe iji kwadebe, ewepụtụ, ịgbanwe ihe, ngwakọta,
11 rụpụta, ma ọ bụ gbanwee ụdị akụrụngwa, yana ngwugwu
12 ma ọ bụ na - esite na ya nweta ahịhịa sitere na ire ere
13 ihe nkesa; 14 (23) “Onye ọrụ nhazi” pụtara onye isi, onye isi ọrụ, onye ọrụ
15 ndị ​​ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ onye nnọchi anya nke onye nhazi;
16 (24) “Onye na-emeputa ihe” pụtara ụlọ ọrụ enyere ikike n'okpuru isi a nke enyere
Ma ọ bụrụ na onye ọrụ ubi na-arụkwa ọrụ ma kwe ka ọrụ ya kwekwara
Ihe nhazi 18; 19 (25) “Onye na-emeputa ihe” pụtara onye isi, onye nlekọta ọrụ, onye ọrụ, onye ọrụ afọ ofufo,
20 ma ọ bụ onye nnọchi anya nke onye na-emepụta ihe;
21 (26) “Onye ọrịa ruru eru” pụtara onye nwetara asambodo edere na ya
22 onye na-eme ọzụzụ nke ya na onye ọrịa ahụ nwere mmekọrịta ọ na-arịa ọrịa mmekọrịta 23;
24 (27) “Ọnọdụ ahụike tozuru oke” pụtara ọrịa ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ahụ
25 egosipụtara na ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ ahụike ruru eru nke onye na-eme ya
26 nye onye ọrịa asambodo edere nke ngalaba ahụ kwadoro
27 dị ka nkebi nke 3 na nke 28 nke Iwu a si dị na nhazi
AKW UNKWỌ UNOFFICIAL 20 RS HB 136 / GA Peeji nke 5 nke 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
Regulationskpụrụ 1 kpọsara gbasaa;
2 (28) “Osisi ihe ọkụkụ” pụtara ihe akụkụ mkpụrụ osisi kpuchiri ekpuchi
3 Cannabis sp. ma ọ bụ agwakọta nke akwụkwọ shredded, ahịhịa, mkpụrụ, na ifuru nke
4 Cannabis sp. osisi; 5 (29) “Kaadị aha njirimara” pụtara akwụkwọ edepụtara nke ahụ
6 na-eme ka mmadụ mata dị ka onye ọrịa ruru eru, na-eleta onye ọrịa ruru eru, ma ọ bụ họpụtara ya
7 onye na-elekọta ya; 8 (30) “Onye ọrịa nwere aha ọma” pụtara onye ọrịa ruru eru nke etinyela akwụkwọ maka,
9 enwetara, ma nwee ezigbo ihe ndekọ njirimara ma ọ bụ nke oge
Nnabata 10 nyere ikike n’aka ngalaba a;
11 (31) “Ebe nchekwa na nchekwa” pụtara ihe enyere ikikere n'okpuru isi nke a
12 na-enye opekata mpe otu (1) nke ọrụ ndị a:
13 (a) Nnwale cannabis ọgwụ nke azụmahịa azụmaahịa enyere ikike n'okpuru
14 Isi nke a; ma ọ bụ 15 (b) Ndị na-enye ọzụzụ na ndị na-azụ ahịa azụmahịa cannabis;
16 (32) “Onye nnochi anya nnochita nchedo” putara onye isi, onye otu,
17 onye ọrụ, onye ọrụ afọ ofufo, ma ọ bụ onye nnọchite nke ebe nchekwa nchekwa;
18 (33) “Mkpụrụ osisi” pụtara osisi osisi na-enweghị okooko osisi ma too ogologo karịa asatọ
19 (8) sentimita; 20 (34) “okingse anwụrụ” pụtara ikuku anwụrụ ọkụ na - esite n'ụọkụ
21 ihe ọkụkụ na - ere ọkụ mgbe ọ bụla; 22 (35) “Akwụkwọ ikike ikikere steeti” pụtara ihe ndị a:
23 (a) Kentucky Board of Medical Licensure; na 24 (b) Kọmịshọn nke Kentucky;
25 (36) “Iji cannabis ọgwụ” ma ọ bụ “iji ọgwụ cannabis” agụnyere
Nnweta, nchịkwa, nnweta, mbufe, ụgbọ njem, ma ọ bụ oriri
27 nke osisi ọgwụ ma ọ bụ ngwa mgbakwunye cannabis nke onye na-ahụ maka ya na-abanye
AKW UNKWỌ UNOFFICIAL 20 RS HB 136 / GA Peeji nke 6 nke 118 HB013610.100 - 366 - XXXX GA
Dabere na Ngalaba 1 ruo 1 nke Iwu a. Okwu ahụ bụ “ọgwụ
2 afọ ”na“ ị useụ ọgwụ cannabis ”adịghị agunye:
3 (a) Onye nwere akwukwo igbo wii wii, ma ọ bụ 4 (b) Iji ma ọ bụ ị consumptionụ wii wii eme ihe site na ise anwụrụ;
5 (37) “itingga leta onye ọrịa ruru eru” pụtara onye debara aha ya n'akwụkwọ dị ka onye ga-elebanye anya na ya
6 ngalaba dị ka achọrọ n'okpuru isiakwụkwọ a ma ọ bụ onye nwere ndekọ dị mma
7 kaadị amata, ma ọ bụ ihe dakọtara, nke enyere dị ka ihe ndị a
Iwu 8 nke steeti ọzọ, mpaghara, ókèala, ala na ụzụ, nwere ihe niile
9 United States, ma ọ bụ obodo Amerịka ghọtara na-enye onye ahụ ohere
10 iji cannabis ọgwụ na ikike nke inye ya; na
11 (38) “Asambodo edere” pụtara akwụkwọ edepụtara na aka nke onye na-eme ihe banyere wee banye.
12 na: 13 (a) Na-ekwuputa na echiche onye ọkachamara nwere ike ịnabata onye ọrịa
14 ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụ puruative na-erite uru site na iji ọgwụ cannabis;
15 (b) Ezipụta ọnọdụ ọnọdụ ahụike tozuru oke maka
16 onye na-eme ọgwụgwọ kwenyere na onye ọrịa ahụ nwere ike ịnata ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụ
Uru 17; na 18 (c) na-ekwenyesi ike na onye na-eme ihe ahụ nwere onye na-agwọ ọrịa adịghị mma
19 mmekọrịta ya na onye ọrịa